ပုဂံမြေ မြင်းကပါရွာ က ကျိန်စာ သင့်သူ (ဖြစ် ရပ် မှန်) - MM Daily Life
ပုဂံမြေ မြင်းကပါရွာ က ကျိန်စာ သင့်သူ (ဖြစ် ရပ် မှန်)
စိန်တိုး တို့ရွာငယ်လေးက ပုဂံမြေမှာ နာမည်ကြီး မြင်းကပါရွာ နဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာရှိနေတယ် ၊ ရွာထဲမှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ထန်းပင်တွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ ထန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ ၊ ယွန်းထည်လုပ်ငန်းတွေ ၊ တစ်ချို့တစ်ချို့က မွေးမြူရေး လုပ်ပြီး အသက်မွေးကြတယ် ၊ ရာဇဝင်တွေထဲက မြန်မာတွေရဲ့အသည်း နှလုံးလို့ တင်စားလောက်တဲ့ ပုဂံမြေမှာ လူဖြစ် လာရ လို့လားမသိဘူး ၊ တစ်ရွာလုံးက မချမ်းသာကြပေမယ့် သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ဘဝင်ကျတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုယ်စီနဲ့ နေပျော်အောင်နေနေကြတယ် ၊ ဘုရားပျက်တွေ.. စေတီအပြိုတွေ ၊ အုတ်ရိုးအပဲ့တွေကြားမှာ သူတို့ ကလေးဘဝက ဆော့ကစားရင်းနဲ့ လွမ်းမောဖွယ်ရာအတိတ်တွေကလည်း တထွေကြီး… ၊
အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင် အစိုးရကလည်း ရဲဘော်နီ ၊ ရဲဘော်ဖြူ စတဲ့ ပါတီတွေကွဲ ၊ အုပ်ချုပ်မှုတွေ ပျက်ဆီးနေတဲ့အချိန် တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကို ထိထိရောက်ရောက် မထိန်းနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကာလ… ၊ စိန်တိုး တို့ ရဲ့ ရွာလေးကလည်း အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုရင်ခွင်နဲ့ ဝေးနေတဲ့ကလေးငယ်လိုဖြစ်နေရတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ရွာတွင်းရွာပြင်မှ ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာ တစ်ခါမှ မဖြစ်ကြဘူး ၊ ဒီလိုမဖြစ်အောင်လည်း ရွာတွေမှာရှိကြတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ၊ ရွာလူကြီး ရပ်မိရပ်ဖတွေက စည်းစည်း လုံးလုံးနဲ့ ထိန်းနိုင်ကြတယ်လေ ၊ မြန်မာပြည်မှာ သာသနာတော် စပြီးထွန်းကားစေတဲ့ အရပ်မို့ထင်တယ် တစ်ရွာလုံးက အေးချမ်းပြီးသားပါပဲ။
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ ပုထုစဉ်တွေမို့ လူတွေရဲ့စိတ်မှာဖြစ်လေ့ရှိ တဲ့ လောဘ ၊ ဒေသ ၊ မောဟ မီးတွေကိုတော့ ထိန်းချုပ်ရခတ်ခဲနေတတ်တယ် ၊ စိန်တိုးတို့ရွာကလေးက ဘေးနားဝန်းကျင်ကရွာတွေလို မချမ်းသာကြပေမယ့်လည်း သူ့ဟာနဲ့သူတော့ နေနိုင်စားနိုင်ကြတယ် ၊ ချွင်းချက်အနေနဲ့ တစ်ချို့ ရွာထဲမှာ နေ့ချင်း ညချင်း ချမ်းသာသွားကြတဲ့ သူတွေလည်း ရှိသေးတယ် ၊ ဘယ်လိုကြောင့် နေ့ချင်းညချင်း ချမ်းသာသွားကြတာလဲဆိုရင် ရွာကလေးရဲ့ ရေခံမြေခံ ကြောင့်လို တစ်ချို့ကပြောကြတယ် ၊ တစ်ချို့ကတော့ ဒီလိုကြီးပွားမှုတွေက သံသရာအတွက်မကောင်းဘူးလို့ ပြောကြတယ် ၊ ဘာကြောင့် သူတို့တွေဒီလိုပြောနေကြတာလဲ….. ၊
စိန်တိုးကတော့ ကိုယ်နဲ့ထိုက်လို့ကိုယ်ရတာ..ဒါကြောင့် ချမ်းသာရတာလို့ပဲ ယုံကြည်ထားတယ် … ၊ ဘယ်လိုတွေ ချမ်းသာကြတာလဲ … ၊ “ စိန်တိုး မင်းသိပြီးပြီလား” အတူတူထန်းရည်သောက်နေရင်းကနေ ဝက်သိုးကလှမ်းမေးလိုက်တဲ့ အခါ စိန်တိုးက “ ဝေ ဘာတုန်းကွ ” “ ရွာတောင်းပိုင်းက ကိုကျော်မြတို့တွေ မနေ့က အိမ်ဝိုင်းထဲမှာ ရေတွင်းတူးရင်း မြေထဲကနေ ရွှေအိုးကြီးတွေ့လို့တဲ့ဟ… ” “ ဟ..မင်းပြောတာတကယ်လားဟ ငါတို့တွေတောင်မသိလိုက်ဘူး ” “ ဟုတ်တယ်ဟေ့.. အဲ့သတင်းကို ကိုကျော်မြရဲ့မိန်းမ မညိုချောပါးစပ်က ယောင်ပြီးထွက်လာလို့ ငါတို့သိရတာ… ငါလည်းငါ့မိန်းမဆီက ပြန်ကြားလာတာဟေ့… ၊ ငါတို့ ကိုကျော်မြကတော့ ဘူးခံငြင်းနေတာပဲ ၊ မကြာခင်ရက်ပိုင်းကျရင် ဒီလူတွေ အိမ်ဝိုင်းတွေပြင်မလား ၊ မြို့ပဲတက်မလားမသိဘူး စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ… ”
သူတို့နှစ်ယောက်စကားကို ကြားဖြတ်အနေနဲ့ သာခင်က “ ဟုတ်တယ် ဒီလူတွေ သွားမေးရင်လည်း ဟိုဘက်ရွာတွေက ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ အမျိုးတွေဆီက အမွေရတယ်လို့ပဲလိမ်မှာသေချာတယ်” သူငယ်ချင်းတွေစကားကို နားထောင်ပြီး နောက် စိန်တိုး ကအားအင်ပြည့်ဝ ဝင်းလဲ့နေတဲ့ မျက်ဝန်းအစုံနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကိုတွေးနေမိတော့တယ် … ။
အညာမြေရဲ့ နေ့လည်ခင်းလေက ပူအိုက်တဲ့အငွေ့အသက်တွေပါနေမြဲပဲ/ ဒီနှစ်ပိုင်းထဲမှာတင် စိန်တိုး တို့ ရွာထဲမှာ အဲ့လို မြေတွင်းတူးရင်း ၊ ရေတွင်းတူး ၊ ရေကန်တူးရင်း ရွှေတိုငွေစတွေရလာတဲ့အကြောင်းတွေ ၊ တစ်ချို့ဆို နေ့ချင်း ညချင်း ကြီးပွားသွားကြတဲ့အကြောင်းတွေ ကြားကြားနေရတတ်တယ် ၊ တစ်နေ့တော့ ဘာအစီအစဉ်မှ မရှိပါဘဲ စိန်တိုး ရဲ့အဖေက အိမ်ဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ မြေတွေကိုတူးဆွနေတာကိုသွားမြင်လိုက်တယ်
“ အဘ…ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ … နေပူကြီးထဲကို ဖယ်ဖယ် ကျုပ် လုပ်လိုက်မယ် ” အဖေလုပ်သူက ဒီနေရာမှာ အပင်တစ်ပင်ပျိုးချင်လို့ မြေတွေကို ဆွနေတာပါလို့ ပြောလာတယ် … သိပ်ကြာကြာမတူးလိုက်ရပါဘူး ၊ သင့်တင့် သလောက် မြေအကျယ်နဲ့ မြေလေးတွေ မွ ထွက်လာတယ် ၊ စိန်တိုးလည်း နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ မြေကြီးထဲ ကို အားစိုက်ပြီး ပေါက်တူးနဲ့ လွှဲပေါက်လိုက်တဲ့အခါ မြေထဲမှာမှာ ပေါက်တူးက မြေအိုးတစ်လုံးနဲ့ ထိတဲ့အသံကိုကြားလိုက်ရ တော့တယ်
“ ဂွက်….. ” “ ဟာ….ဟင်… ” စိန်တိုး တစ်ယောက် အတော်လေး ရင်ခုန်သွားမိပြီးတော့ မြေကြီးကိုသာသာလေး ယက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မြေကြီးထဲမှာ ပေါက်တူးအရှိန်နဲ့ကွဲအက်သွားတဲ့ အိုးခြမ်းပဲ့လေးတွေကို တွေ့လိုက်ရတယ် … ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆက်ပြီးတော့ လက်ကလေးနဲ့ ယက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အိုးခြမ်းပဲ့တွေ အများကြီးအောက်ထဲကနေ ဖြိုးဖြိုးဖြောက်ဖြောက် ဖြစ်နေတဲ့ ပတ္တမြားခဲလေးတွေကို ညစ်နွမ်းအိုမင်းနေပြီး အိစင်းနေတဲ့ ရွှေထည်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို တွေ့လိုက်ရတယ် …. ၊ ရွေတွေကို သာသာလေးယူပြီး ပုဆိုးစနဲ့ပွတ်ကြည့်လိုက်တော့မှ အရည်အသွေးအရမ်းကောင်းတဲ့ ရွှေမှန်းသိသာအောင် ဝင်းတောက်လာပါလေရော… ၊
ဘာပြောကောင်းမလဲ စိန်တိုးရော သူ့အဖေရော ခဏလေး ကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်နေရာက စိန်တိုးက “ အဖေ…အဖေ…သားတို့ချမ်းသာပြီးဟား.ဟား.. ချမ်းသာပြီ အဖေ…. ” “ ဟား…ဟား…. ဘုရားက ငါတို့ကို ပေးပြီသားရေ ငါတို့ ဘဝတော့ နေ့ချင်းညချင်းပြောင်းပြီ….ဟားဟား ” သားအဖနှစ်ယောက်တည်းရှိကြတာမို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အားရဝမ်းသာ ပွေ့ဖက်ထားကြရင်း အပျော်လွန်နေမိတယ်…. ၊ ရွာထဲကလူတွေ မြေကြီးထဲကနေ ရရနေတယ်လို့ သတင်း ကြားထားတာ အခုတော့ သူတို့သားအဖလည်း ရခဲ့ပြီမဟုတ်လား….. ၊
ရှေးဟောင်းလက်ရာ အုတ်ကျောက် တွေနဲ့ သေချာဆောက်ထားတဲ့ ကျောင်းကြီးမို့ အတော်လေးအိုနေယုံကလွဲပြီး ခန့်ထည်နေတုန်းပဲ… ၊ ကျောင်းအိုကြီးရဲ့အထဲမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ဆရာတော်အိုကြီးတစ်ပါးအနားမှာလည်း ရွာသူရွာသားတစ်ချို့က အုံနေပြီး အဲ့ဒီ့ရွာသူရွာသားတွေထဲက တစ်ယောက်က အရင်ဆုံး လျှောက်လိုက်တာက “ ဘုန်းဘုန်းဘုရား တပည့်တော်တို့ရွာထဲမှာ လူတော်တော်များများက မြေကြီးတူးရင်းနဲ့ မြေကြီးထဲက ရွှေငွေ ရတနာတွေကို ရနေတယ်လို့သိထားရတယ်ဘုရား…ဘာကြောင့်လို့ အရှင်ဘုရားမြင်ပါသလဲဘုရား”
“အိမ်း ပစ္စည်း ဥစ္စာဆိုတာ လူတွေရဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ကံတွေအလျှောက် ရရှိ နိုင်တယ် ၊ ဘဝဟောင်းက ဆွေတော်မျိုးတော်တွေက သူတို့အတွက်ရည်စူးပြီး ကုသိုလ်လုပ်ပေးစေချင်လို့ ပေးတာမျိုးတို့ ၊ သိုက်နန်းတွေက ပေးတာမျိုးတို့ ၊ ကိုယ်နဲ့ အကြောင်း တိုက်ဆိုင်ပြီး ရချိန် ၊ ပိုင်ဆိုင်ချိန်တန်လို့ ရတာတို့…စသဖြင့်ပေါ့ ဦးဇင်း နားလာ ထားပေမယ့် ၊ တစ်ဖက်က အခြေခံကျကျပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီမြေ ဒီနေဆိုတာ ရှေးဟောင်းနယ်မြေ … ၊ ပိုတိကျ သွားတာက အခုရတဲ့သူတေ အားလုံးရထားတဲ့ ဒီပစ္စည်းတွေက ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတာပဲလေ… ၊ ဒီလိုမျိုး တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေကို ရနေ တယ်ဆိုတော့ ဒါတွေက ဘုရားရဲ့ ဌာပနာပစ္စည်းတွေလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် ၊ ဦးဇင်းတို့ ရွာသားတွေ ကိုယ့်အိမ်အောက်..အိမ်နေရာမှာ ရှေးဟောင်းဘုရားပြို ဘုရားပျက်တွေ မရှိနိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူများ အာမခံနိုင်မှာတဲ့လဲ ၊ နောက်ပြီး ရွှေဆိုတဲ့ သတ္ထုမျိုး က မြေအောက်က မြေလွှာတွေကြောင့် မြေကြီးထဲမှာပဲ နေရာရွှေ့တတ်တဲ့သဘောရှိသေးတယ်… ၊ ဒီတော့ ဦးဇင်းအနေနဲ့ အကြံပေးချင်တာပါ… ၊ ကိုယ်ရထားလို့ ကိုယ့်ဥစ္စာမှန်ပါတယ်… ၊ ကိုယ်ကျိုးလည်းသုံးရင်း ကုသိုလ်လည်း ပြုကြပါလို့ပဲပြောချင်တယ် ”
တစ်ချို့ကလည်းပြောကြတယ်… ဒီရွှေတွေငွေတွေ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေက ဘုရား ဌာပနာတိုက်ကနေ ပေါက်ထွက်လာ တာတဲ့ …. ၊ စေတီပြို ၊ စေတီပျက်တွေထဲကနေ ငလျက်ဒဏ်ကြောင့် မြေကြီးထဲကိုရောက်ပြီး မြေလွှာအလိုက် ရွေ့လာ တဲ့ ရတနာတွေတဲ့ …. ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်နိုင်တာက ရှေးလူတွေ ဝှက်ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်ရင်ဖြစ် ၊ မဟုတ်ရင် ဘုရားဌာပနာတွေပဲ…. ၊ ခေတ်ကာလကလည်း အစိုးရက တစ်နိုင်ငံလုံးအထိ အာဏာမရောက်နိုင်သေး တော့ ဒီလိုတိူးလို့ရလာတဲ့ရတနာတွေကိုလည်း သိမ်းတာဆည်းတာ ဖမ်းတာတွေ မရှိဘူး ၊ ကိုယ့်ခြံထဲမှာတွေ့တာ ကိုယ်ပိုင်တာပဲလို့သတ်မှတ်ပြီး သိုသိုသိပ်သိပ်နဲ့ နေနေကြတဲ့သူတွေကများတယ်… ၊
ဘုရားပစ္စည်း ဆိုတာထက် ကိုယ်ရ ကိုယ်ယူ ၊ ကိုယ်နဲ့ထိုက်လို့ ကိုယ်ရတာလို့ပဲ ခံယူထားကြတယ်လေ … ၊ နောက်ပိုင်းမှာ တစ်ရွာလုံးက ရနေမှန်းသိတော့ ဘုရားအိုတွေ နားမှာလည်း မြေတွေ လိုက်တူးလိုတူး နဲ့ အလုပ် တောင်ကောင်းကောင်းမလုပ်စားကြတော့ဘဲ ဒီလို ဟိုတူးဒီတူးလုပ်ရတာကို ပိုခုံမင်နေတတ်သွားကြတယ် ၊ ပုဂံခေတ်က ရှေးလူတွေရဲ့ ကျိန်စာတွေက ဘယ်လောက်ထိပြင်းတယ်ဆိုတာတို့ ၊ ဘုရားပစ္စည်း အဆိပ်သီးဆိုတဲ့ စကားတွေကိုလည်း မစဉ်းစားနိုင်တော့…. လောဘမီးကြောင့် အမြင်တွေကို ကွယ်သွားနေတာမျိုး…. ။
ရောဂါ ထွေထွေထူးထူးမရှိပါဘဲနဲ့ စိန်တိုးရဲ့အဖေ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွား ခဲ့တယ် အိပ်နေရင်းနဲ့နှိုးမရတော့ဘဲ အသက်ပါ ပါသွားတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့တာလေ… ၊ စိန်တိုးလည်း အဖေဖြစ်သူအတွက် စိတ်မကောင်းခြင်း ကြီးစွာ ဖြစ်နေ တယ် ၊ ရထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကိုတောင် မရောင်းချရသေးခင် ၊ မဖြုန်းရ မသုံးရသေးခင်မှာ အဖေဖြစ်သူ ကွယ်လွန် သွားတော့ ပိုစိတ်ထိခိုက်ရတာပေါ့… ၊ အဆုံးမှာ စိန်တိုး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပြီး တစ်ယောက်တည်း တစ်ကိုယ် တည်း အဝတ်လေးနည်းနည်းနဲ့ ရတနာထုတ်ကို ကျောကအိတ်ထဲမှာ သေချာဝှက်ထားပြီးတော့ ရန်ကုန်မြို့ကို တက်လာ ခဲ့တယ်… ၊
တောမှာမွေး တောမှာကြီးလာတဲ့သူမို့ ရန်ကုန်ဆိုတာ မျက်လုံးထဲမှာ နတ်ပြည်ကြီး လိုဖြစ်နေတယ် ၊ တောမှာလို ထန်းတောတွေအစား တိုက်ကြီးကြီးတွေပြည့်နေတယ် ၊ တောက ရွာသူမ ညိုချောလေးတွေအစား မျက်နာချေတွေနဲ့ လှချင်တိုင်းလှနေကြတဲ့ ရန်ကုန်သူတွေကို ငေးနေမိတာအမော… ၊ ရန်ကုန်သာရောက်လာခဲ့တာ အသိအကျွမ်းလည်းမရှိ ၊ ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှန်းလည်းမသိ ၊ ရည်ရွယ်ချက်လည်းမရှိ … ၊ ဖြစ်ချင်တာက အိတ်ထဲက ရတနာတွေကို ထုတ်ရောင်းပြီးတော့ ရန်ကုန်မှာ တိုက်လေးတစ်တိုက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလေးတစ်ခုလုပ်ရင်း သူဌေးလိုမျိုးနေချင် တာလေ.. ၊
“ဗျို့ နောင်ကြီး ” “ ခင်ဗျာ…ကျွန်တော့်ကိုခေါ်တာလားဗျာ ” စိန်တိုး တစ်ယောက်တည်း ရန်ကုန်ဘူတာကြီးနားမှာ ယောင်ပေပေနဲ့ ဟိုကြီးဒီကြည့် လုပ်နေတုန်း အတော်လေးသန့်သန့်ပြန့်ပြန့်နဲ့ သူဌေးရှုံးလောက်အောင် ဝတ်ဆင် ထားတဲ့ မျက်နာစိမ်းတစ်ယောက်က တော်တော်လေးနားဝင်ချို ဖော်ရွေတဲ့လေသံနဲ့ စပြီး မိတ်ဖွဲ့လာတယ် ၊ ရိုးသားတဲ့ တောသူတောင်သားမို့ စကားကိုချိန်ပြောရမှန်းလည်းမသိ ၊ လူတိုင်းကိုမယုံရမှန်းလည်းမသိနဲ့ စိန်တိုးတစ်ယောက် သူ အမွေရထားတဲ့ ရွှေထည် ၊ ကျောက်ထည်တွေ တစ်ချို့ကို ဈေးများများရတဲ့ဆီမှာ ရောင်းချင်ပြီး ငွေကိုလက်ငင်းလိုချင်တဲ့ အကြောင်း ၊ လက် ရှိ ရန်ကုန်မှာ နေစရာလေးတစ်ခုကိုဝယ်ချင်တဲ့အကြောင်း ၊ လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုကို စပြီးလုပ်ချင်တဲ့ အကြောင်းတွေပြောပြလိုက်တော့ လူစိမ်းက အတော်လေးမျက်နာပွင့်သွားပြီး
“ နောင်ကြီးကျုပ်နဲ့တွေ့တာ ကံကောင်း တာပဲ…ရန်ကုန်လို့နေရာကြီးမှာ နောက်ကြီး တစ်ယောက်တည်း ဒီလိုနေနေရင် လူလိမ်တွေ ၊ အလစ်သုတ်သမားတွေနဲ့ နောင်ကြီးပါလာတာတွေတောင်အကုန်ပြောင်သွားဦးမယ် ၊ ကျုပ်ကလည်း ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ဒီနားမှာ နိုင်ငံခြားသား တွေနဲ့ အရောင်းအဝယ်လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးအပြန် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ ချိန်းထားတာနဲ့ ရပ်စောင့်နေရင်းကနေ နောင်ကြီးကိုမြင်တော့ အကူညီလိုမယ်ထင်လို့မေးကြည့်တာပါ ” “ ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ဗျာ..ဒါနဲ့ ဒီက..နာမည်က ”
“ သြော်…ဟော..ဟော.. ကျွန်တော့်နာမည်က သန်းမြင့်လှိုင်ပါဗျ… ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာ ကျုပ်ကိုမသိတဲ့သူခပ်ရှားရှားပါ.. ၊ ကျုပ်က ကျောက်စိမ်းတွေ ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ… ” “ ဟုတ်ပါပြီဗျာ… ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကူညီပေးမယ်ဆို တစ်ဆိတ်လောက်ဗျာ…ကျွန်တော် အမွေရထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတစ်ချို့ကို ရောင်းချင်တယ် ” လူစိမ်းက သူ့လက်က နာရီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်း “ ကောင်းပြီဗျာ..ကျုပ်ဘော်ဒါတော့ မလာတော့ဘူးထင်ပါတယ် လာဗျာ ကျွန်တော် နောင်ကြီးကို လိုက်ကူညီပေးမယ်… ကျုပ်နောက်သာလိုက်ခဲ့ပေတော့… ”
လူစိမ်းနောက်က အားကိုးတကြီးနဲ့ လျှောက်လိုက်သွားရင်း နာရီတော်တော်လေးကြာအောင် လမ်းလျှောက်လိုက်ပြီး နောက်မှာ စိန်ကုလားဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရောက်လာခဲ့တယ် “ ကဲ ဒီကဆရာကြီးက ဘာပစ္စည်းရောင်းချင်တာလဲ ” ရတနာဆိုင်ပိုင်ရှင်ပုံစံနဲ့တူတဲ့ ကုလားက သန်းမြင့်လှိုင်ကို သိသလိုနဲ့ ရင်းရင်းနီးနီးနှုတ်ဆက်ပြီး သန်းမြင့်လှိုင်က မိတ်ဆက်ပေးလိုက် စိန်တိုး ဘက်ကိုလည့်ပြီးတော့ မေးလိုက်တဲ့အခါ စိန်တိုး က ဘေးဘီဝဲယာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီး သူ့ရဲ့ ပုဆိုးအစုတ်လေးနဲ့ ထုတ်ထားတဲ့အထုတ်ထဲကို ဖြည်းဖြည်းလေးနှိုက်လိုက်ပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ ရွှေတွေဝင်းအိနေတဲ့ လက်ကောက်တစ်ခုနဲ့အတူ ရဲရဲတောက်နေတဲ့ ကျောက်ကြီးတပြူးပြူးနဲ့ ဘယက်ကြီးတစ်ကုံး ပါလာတယ် ၊
ရတနာဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ သန်းမြင့်လှိုင်က အတော်လေး မျက်လုံးမျက်စံပြုးသွားပြီး စိန်တိုးပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် မှန်ဘီလူးနဲ့ကြည့်ရင်း မယုံသလိုနဲ့ “ ဒါ ခင်ဗျားတို့ ဘိုးဘွားပိုင်တာဟုတ်..ဟုတ်…ဟုတ်ပါတယ်နော် ” စိန်တိုးကလည်း လိမ်တာကို သိသွားမှာစိုးလို့ စကားနည်းနည်းထစ်သွားပြီး “ ဟာ..ဟုတ်..ဟုတ်.ပါတယ်ဗျ…ဘာလဲ့ ကျုပ်ကလိမ်ပြောရမှာလား.. ကဲပြော ကျုပ်ကိုဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ…တောသားဆိုပြီးဈေးနှိုမ်မယ်တော့မကြံနဲ့နော် ကျုပ်ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးကို တစ်ခြားမှာလည်းစုံစမ်းလာခဲ့ပြီးသား…. ” လောဘရဲ့အရှိန်တွေကြောင့် စိန်တိုး ပြောမိပြောရာတင်းပြောလိုက်မိတယ် တစ်ဖက်က ရတနာဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်း အမှန်တကယ်ကိုသဘောကျသွားပြီး စိန်တိုးပေးတဲ့ ရှေးဟောင်းလက်ဝတ်လက်စားတွေကို ပေါက်ဈေးထက် သုံးပုံပုံ တစ်ပုံစာကို လျော့ပြီး စိန်တိုးကို ပေးလိုက်တယ်… ၊ ဒီလိုလျော့ထားပေမယ့်လည်း ရတနာဆိုင်ပိုင်ရှင် ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ငွေပုံကြီးက စိန်တိုးတစ်သက် တစ်ကြိမ်မှ မမြင်ဖူးတဲ့ငွေတွေမို့ တစ်ချက်မငြင်းတော့ဘဲ ပွဲဖြစ်သွားခဲ့တယ် ၊
နောက်ပိုင်း သန်းမြင့်လှိုင်အကူအညီနဲ့ရန်ကုန် မင်းလမ်း တာမွေ ဘက်မှာ အိမ်လေးတစ်လုံးကို ဝယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ၊ အဲ့ဒီ တုန်းက ဒီနေ့ခေတ်လိုမျိုး ရပ်ကွက်ရယ်လို့တောင် သီးသန့်မရှိသေးတဲ့အချိန် ၊ တိုက်မြင့်တွေဆို ဝေလာဝေး….. ၊ အကုန်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ဝန်းလေးတွေနဲ့ နေနေကြတဲ့အချိန် ၊ စိန်တိုးအတွက်တော့ နေစရာမပူရတော့ပြန်ဘူး… ၊ စားဖို့ ကလည်း ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကိုရောင်းလိုက် သုံးလိုက်ဖြုန်းလိုက်နဲ့အဆင်ကိုပြေနေတာပဲ ၊ ဒီကြားထဲ ကိုသန်းမြင့်လှိုင်က ကူညီပေးတော့ အများကြီးအဆင်ပြေနေတယ် ၊ ဒီလူကိုလည်း ညီအစ်ကိုအရင်းလိုမျိုး မိတ်ဆွေလိုမျိုး မျက်လုံးမှိုတ်ပြီးကို ယုံနေမိတော့တယ် ၊
အချိန်တွေကြာလာတော့ စိန်တိုးလက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေလည်း သုံးလိုက်ဖြုန်းလိုက်နဲ့ တော်တော်လေး ပါးလာပြီ… ၊ ဒါ့ကြောင့် ဝင်ငွေရတဲ့ လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုတော့ လုပ်မှပဲဆိုပြီး ယုံကြည်ရတဲ့ သန်းမြင့်လှိုင်နဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်တဲ့အခါ သန်းမြင့်လှိုင်က သူလည်း လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ် ၊ အရာင်းအဝယ်ပုံစံမျိုးလေးပဲ အရင်လည်းသိပ်မလို အမြတ် အများကြီး ကျန်တယ်တယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုအကြောင်းပြောပြတော့ စိန်တိုးလည်း လူမပင်ပန်းဘဲ ငွေရွှင်တဲ့လုပ်ငန်း ကို သဘောကျသွားပြီး နောက်ဆုံးကျဉ်ဆံအဖြစ် ပါလာသမျှရတနာတွေကို အကုန်ရောင်းထုတ်လိုက်ပြီး ငွေတွေကို ရင်းနီးယုံကြည်ရတဲ့ သန်းမြင့်လှိုင်လက်ထဲကို ထိုးထည့်ပေးလိုက်တယ်။
“ ဒါပဲလေ… ကို စိန်တိုး များများလိုချင်ရင် များများရင်းရတယ်….ဟားးး မပူနဲ့ ခင်ဗျားငွေတွေကို နှစ်ဆ..သုံးဆ…လေးဆ ပွားအောင် ကျုပ်တာဝန်ယူတယ် ကျုပ်ဖြင့် အရင်းမရှိလို့ငြိမ်နေရတာ ဒီလိုသာဆိုလို့ကတော့ စဉ်းစားစရာ တောင် မလိုဘူးဗျို့ အလုပ်ဖြစ်ပြီ … ” အဲ့ဒီလိုပြောသွားပြီး နောက်တစ်နေ့ကတည်းက သန်းမြင့်လှိုင်တစ်ယောက် စိန်တိုးဆီကို ရောက်မလာတော့တာ လေးနှစ်ထဲတောင်ရောက်လာခဲ့ပြီ …. ၊ သန်းမြင့်လှိုင်အကြောင်းကိုလည်း ဘယ်မှာမှ စုံစမ်းမရ ၊ စိန်တိုး သိလိုက်ပါပြီ…. လူယုံသတ်လို့သေတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို… ၊
အခုတော့ စိန်တိုးတစ်ယောက် အိမ်ကလေးအဖက်တင်တာကလွဲပြီး လက်ထဲ သုံးစရာငွေတစ်ချို့အပြင် ဘာမှမရှိတော့တဲ့ ဘဝကိုရောက်လာခဲ့ရပြီ.. ၊ ရှိတာလေးတွေကလည်းသုံးရင်းသုံးရင်း .. ဝင်ငွေမရှိ …အထွက်ချည်းပဲဆိုတော့ ဘယ်လို မျိုးကြာကြာရပ်တည်နိုင်မှာလဲ…. ၊ နောက်ဆုံး မရှက်မကြောက် အလုပ်တစ်ခုခုတော့ လုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး စိန်တိုး တစ်ယောက် ဆိုက်ကားလေးတစ်စင်းကိုဝယ်ပြီး ရပ်ကွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပတ်နင်းရင်း ဆိုက်ကားသမားဘဝကို ရောက်သွားခဲ့ရတယ် … ၊ ဆိုက်ကားသမားတွေထဲမှာမှ အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့နေနိုင်တဲ့ ရှားပါးဆိုက်ကားသမားလေး စိန်တိုး ပေါ့….. ။
ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲလာပြန်တော့ စိန်တိုးလည်း မိန်းမတွေဘာတွေရပြီး သားသမီးနှစ်ယောက်တောင် ထွန်းကား လာခဲ့ပြီလေ ၊ ကလေးနှစ်ယောက်မှာ အငယ်မလေးက သုံးနှစ်သားလေး နဲ့ အကြီးမက လေးနှစ် …. ၊ အရင်လူပျိုတုန်း က ကိုယ့်တစ်ကိုယ်စာ အဆင်ပြေရင်ပြီးရောဆိုပြီး အလုပ်ကို ငတ်မှ ထလုပ်တတ်ပေမယ့် အခုတော့ မိသားစုနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်လာပြီမို့ စိန်တိုးတစ်ယောက် နေကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ၊ လုပ်ချင်ချင် မလုပ်ချင်ချင် ဆိုက်ကားနင်းတဲ့အလုပ်ကို မရပ်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်… ၊ ပင်ပန်းတာတွေစုလာတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျင်းပြေ သောက်စားရင်းက အရက်ကိုလည်း ဖြည်းဖြည်းချင်းစွဲစပြုလာတယ် ၊
တစ်နေ့တော့ စိန်တိုးဘဝကို အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲစေမယ့် အဖြစ်ဆိုးကြီးတစ်ခုနဲ့ ကြုံလာခဲ့တယ်… ၊ အိမ်မှာ ဇနီးသည်ဘက်က ဇနီးရဲ့ညီမ … စိန်တိုးရဲ့ခယ်မတော်သူ အပျိုမလေးတစ်ယောက် နယ်ကနေ လာလည်ရင်း စိန်တိုးတို့ အိမ်မှာ တည်းဖြစ်တယ် ၊ စိန်တိုးရဲ့ဇနီးသည်ကလည်း ဇာတ်ဆိုရင် မကြည့်ဘဲမနေနိုင်တတ်တဲ့သူမို့ တစ်နေ့ ယောကျာ်း ဖြစ်တဲ့သူဆိုက်ကားနင်းသွားနေတုန်း ကလေးနှစ်ယောက်ကို ချီပြီး လမ်းထိပ်နားက ဇာတ်ပွဲသွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ် ၊ ဖြစ်ချင်တော့ အိမ်မှာလာတည်းတဲ့ ညီမဖြစ်တဲ့သူက နေမကောင်းလို့ဆိုပြီး အိမ်မှာအိပ်ပြီးကျန်နေရစ်ခဲ့တယ် ၊ဟိုးတုန်းက အိမ်တွေမှာ အိပ်ရင် အခန်းမဖွဲ့ဘဲ တန်းဆီအိပ်တတ်ကြတာမို့ စိန်တိုးတို့မိသားစုတွေ အိပ်တဲ့ ခြင်ထောင်ဘေးနားလေး မှာ ခွေခွေလေး အိပ်ပျော်နေရစ်ခဲ့တယ်… ၊ နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း ခြင်ကိုက်တာကတစ်ကြောင်း နေမကောင်းလို့ ခြင်ထောင်ထမထောင်ချင်တာကတစ်ကြောင်းကြောင့် ဘယ်သူမှမရှိတုန်း စိန်တိုးတို့မိသားစု ခြင်ထောင်ထဲ ခယ်မဖြစ်သူကဝင်အိပ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ၊
ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျချင်တဲ့ စိန်တိုးက ဒီလိုညမျိုးကျမှ စောစောစီးစီး ဆိုက်ကားသိမ်းလာပြီး အရက်ကမူးလာသေးတယ် ၊ မူးမူးနဲ့ မယားချောလေးရှိတဲ့ခြင်ထောင်ဆီကိုဝင်ပြီး ဇနီးသည်ကို သိုင်းဖက်လိုက်မိတဲ့အခါ….ဇနီးမဟုတ်ဘဲ သူ့ခယ်မ ဖြစ်နေတာကို မြင်လိုက်ရတော့တယ် … ၊ စိန်တိုးလည်း အတော်လေးလန့်သွားပြီးချင်ချင်း ခြင်ထောင်အပြင်ကို ထွက်မယ် ပြုလိုက်တဲ့အခါ ခယ်မလုပ်တဲ့သူက ဘာမပြောညာမပြော အသံဗြဲကြီးနဲ့ ငိုရင်း ထအော်ပါလေရော… “ ကယ်ကြပါဦးရှင်…ဒီမှာ ကျွန်မ အစ်မရဲ့ယောကျာ်းလူယုတ်မာ စိန်တိုး ကျွန်မကို မတရားပြုကျင့်နေပါတယ်ရှင် …ကယ်ကြပါဦး… ”
စိန်တိုး လည်း ဘာမှမလုပ်မိသေးခင်မှာ မှားယွင်းပြီး ဖက်မိရာကနေ ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စမို့ လန့်နေတုန်း ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို အရမ်းတိုက်ဆိုင်လွန်းပြီး ဇနီးဖြစ်တဲ့သူက ဇာတ်ပွဲပြီးလို့ ကလေးနှစ်ယောက်ချီပြီး ပြန်လာတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်နေပြန်တယ်… ၊ ဘယ်သူမှန်တယ် မှားတယ်ဆိုတာထက် ဇနီးဖြစ်တဲ့သူရော ကလေးတွေအပြင် ၊ အော်သံကြားလို့ ရပ်ကွက်ထဲက ပြေးလာပြီး အိမ်ထဲရောက်လာကြတဲ့သူတွေအားလုံးအမြင်မှာ စိန်တိုးက ခယ်မရဲ့ခြင်ထောင်ထဲက ထွက်လာတာကိုပဲ မြင်ကြတယ်လေ… ၊ မူးကလည်းမူးနေတဲ့သူမို့ အများနဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ ရှင်းပြမရတော့ဘဲ စိန်တိုး ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသေချာချလိုက်ပြီး စိတ်ဆိုးနေတဲ့ ဇနီးသည်ပါးလေးကို ဖွဖွလေးကိုင်လိုက်တယ်။
စိန်တိုးရဲ့လက်ကို ဇနီးသည်က ရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါ ဇနီးကိုသိပ်ချစ်တဲ့ စိန်တိုးကအပြစ်မဆိုဘဲ ပြုံးထားရင်း သူ့ကလေး တွေကို ဝအောင်နမ်းလိုက်တယ် နမ်းနေတုန်းမှာပဲ ဇနီးလုပ် တဲ့သူက အိမ်ပေါ်ကဆင်းမယ်…ရှက်တယ်ဆိုပြီး အထုတ်တွေ ဆွဲပြီး အဝတ်တွေထည့်နေတယ် ၊ စိန်တိုးကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှ ပြောမနေတော့ဘဲ အိမ်အပေါ်ကိုပြေးတက်သွား လိုက်တယ်… ၊ ခဏလေးကြာတော့ အိမ်ပေါ်ကနေ “ဝုန်း” ဆိုတဲ့ အသံကြီးကိုလူတိုင်းကြားလိုက်ရလို့ အံ့သြသွားပြီး ပြေးတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အိမ်ပေါ်မှာ လည်ပင်းကြိုးကွင်းတန်းလန်းကြီးနဲ့ သေနေတဲ့ စိန်တိုးနဲ့အတူ သူကြိုးဆွဲချ ခါနီး ခြေထောက်နဲ့ကန်ထုတ်လိုက်တဲ့ ခွေးခြေအပုလေးတစ်ခုံးကို လဲလျက်သားလေးမြင်လိုက်ရတယ်.. ၊
ဒီအဖြစ်ကိုမြင်မှ ဇနီးလုပ်တဲ့သူကလည်း ယူကြုံးမရတွေဖြစ် ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကလည်း သနားတဲ့သူကသနားကြ တစ်ချို့ က စိန်တိုး အရက်ကြောင်ကြောင်ပြီး သတ်သေ သွားတာလို့ ခနဲ့ကြနဲ့ စိန်တိုး တစ်ယောက် သူမှန်ကန်ကြောင်းကို အသက်နဲ့လဲပြီးပြသွားရင်း မိသားစုကိုမျက်နာမပြရဲလို့ ထွက်ပေါက်ရှာသွားခဲ့ပြီလေ….. ။ မြင်းကပါ အရပ်က ရတနာပစ္စည်းတွေရဲ့ ကျိန်စာတွေကြောင့် စိန်တိုး ဒီလိုများ ဖြစ်ရလေသလားလို့ ထင်နိုင် လောက်ပါရဲ့……… ။
စိနျတိုး တို့ရှာငယျလေးက ပုဂံမွမှော နာမညျကွီး မွငျးကပါရှာ နဲ့ခပျလှမျးလှမျးမှာရှိနတေယျ ၊ ရှာထဲမှာတော့ ထုံးစံအတိုငျး ထနျးပငျတှဝေဝေဆောဆာနဲ့ ထနျးနဲ့ပတျသတျတဲ့လုပျငနျးတှေ ၊ ယှနျးထညျလုပျငနျးတှေ ၊ တဈခြို့တဈခြို့က မှေးမွူရေး လုပျပွီး အသကျမှေးကွတယျ ၊ ရာဇဝငျတှထေဲက မွနျမာတှရေဲ့အသညျး နှလုံးလို့ တငျစားလောကျတဲ့ ပုဂံမွမှော လူဖွဈ လာရ လို့လားမသိဘူး ၊ တဈရှာလုံးက မခမျြးသာကွပမေယျ့ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ဘဝငျကတြဲ့စိတျကလေးတှကေိုယျစီနဲ့ နပြေျောအောငျနနေကွေတယျ ၊ ဘုရားပကျြတှေ.. စတေီအပွိုတှေ ၊ အုတျရိုးအပဲ့တှကွေားမှာ သူတို့ ကလေးဘဝက ဆော့ကစားရငျးနဲ့ လှမျးမောဖှယျရာအတိတျတှကေလညျး တထှကွေီး… ၊
အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးကဆိုရငျ အစိုးရကလညျး ရဲဘျောနီ ၊ ရဲဘျောဖွူ စတဲ့ ပါတီတှကှေဲ ၊ အုပျခြုပျမှုတှေ ပကျြဆီးနတေဲ့အခြိနျ တိုငျးပွညျတဈခုလုံးကို ထိထိရောကျရောကျ မထိနျးနိုငျဖွဈနတေဲ့ကာလ… ၊ စိနျတိုး တို့ ရဲ့ ရှာလေးကလညျး အစိုးရ အုပျခြုပျမှုရငျခှငျနဲ့ ဝေးနတေဲ့ကလေးငယျလိုဖွဈနရေတယျ ၊ ဒါပမေယျ့ ရှာတှငျးရှာပွငျမှ ပွသနာတဈစုံတဈရာ တဈခါမှ မဖွဈကွဘူး ၊ ဒီလိုမဖွဈအောငျလညျး ရှာတှမှောရှိကွတဲ့ ဘုနျးတျောကွီးတှေ ၊ ရှာလူကွီး ရပျမိရပျဖတှကေ စညျးစညျး လုံးလုံးနဲ့ ထိနျးနိုငျကွတယျလေ ၊ မွနျမာပွညျမှာ သာသနာတျော စပွီးထှနျးကားစတေဲ့ အရပျမို့ထငျတယျ တဈရှာလုံးက အေးခမျြးပွီးသားပါပဲ။
ဒါပမေယျ့ တဈခါတဈလမှော ပုထုစဉျတှမေို့ လူတှရေဲ့စိတျမှာဖွဈလရှေိ့ တဲ့ လောဘ ၊ ဒသေ ၊ မောဟ မီးတှကေိုတော့ ထိနျးခြုပျရခတျခဲနတေတျတယျ ၊ စိနျတိုးတို့ရှာကလေးက ဘေးနားဝနျးကငျြကရှာတှလေို မခမျြးသာကွပမေယျ့လညျး သူ့ဟာနဲ့သူတော့ နနေိုငျစားနိုငျကွတယျ ၊ ခြှငျးခကျြအနနေဲ့ တဈခြို့ ရှာထဲမှာ နခေ့ငျြး ညခငျြး ခမျြးသာသှားကွတဲ့ သူတှလေညျး ရှိသေးတယျ ၊ ဘယျလိုကွောငျ့ နခေ့ငျြးညခငျြး ခမျြးသာသှားကွတာလဲဆိုရငျ ရှာကလေးရဲ့ ရခေံမွခေံ ကွောငျ့လို တဈခြို့ကပွောကွတယျ ၊ တဈခြို့ကတော့ ဒီလိုကွီးပှားမှုတှကေ သံသရာအတှကျမကောငျးဘူးလို့ ပွောကွတယျ ၊ ဘာကွောငျ့ သူတို့တှဒေီလိုပွောနကွေတာလဲ….. ၊
စိနျတိုးကတော့ ကိုယျနဲ့ထိုကျလို့ကိုယျရတာ..ဒါကွောငျ့ ခမျြးသာရတာလို့ပဲ ယုံကွညျထားတယျ … ၊ ဘယျလိုတှေ ခမျြးသာကွတာလဲ … ၊ “ စိနျတိုး မငျးသိပွီးပွီလား” အတူတူထနျးရညျသောကျနရေငျးကနေ ဝကျသိုးကလှမျးမေးလိုကျတဲ့ အခါ စိနျတိုးက “ ဝေ ဘာတုနျးကှ ” “ ရှာတောငျးပိုငျးက ကိုကြျောမွတို့တှေ မနကေ့ အိမျဝိုငျးထဲမှာ ရတှေငျးတူးရငျး မွထေဲကနေ ရှအေိုးကွီးတှလေို့တဲ့ဟ… ” “ ဟ..မငျးပွောတာတကယျလားဟ ငါတို့တှတေောငျမသိလိုကျဘူး ” “ ဟုတျတယျဟေ့.. အဲ့သတငျးကို ကိုကြျောမွရဲ့မိနျးမ မညိုခြောပါးစပျက ယောငျပွီးထှကျလာလို့ ငါတို့သိရတာ… ငါလညျးငါ့မိနျးမဆီက ပွနျကွားလာတာဟေ့… ၊ ငါတို့ ကိုကြျောမွကတော့ ဘူးခံငွငျးနတောပဲ ၊ မကွာခငျရကျပိုငျးကရြငျ ဒီလူတှေ အိမျဝိုငျးတှပွေငျမလား ၊ မွို့ပဲတကျမလားမသိဘူး စောငျ့ကွညျ့ရမှာပဲ… ”
သူတို့နှဈယောကျစကားကို ကွားဖွတျအနနေဲ့ သာခငျက “ ဟုတျတယျ ဒီလူတှေ သှားမေးရငျလညျး ဟိုဘကျရှာတှကေ ဘယျကမှနျးမသိတဲ့ အမြိုးတှဆေီက အမှရေတယျလို့ပဲလိမျမှာသခြောတယျ” သူငယျခငျြးတှစေကားကို နားထောငျပွီး နောကျ စိနျတိုး ကအားအငျပွညျ့ဝ ဝငျးလဲ့နတေဲ့ မကျြဝနျးအစုံနဲ့ တဈစုံတဈရာကိုတှေးနမေိတော့တယျ … ။
အညာမွရေဲ့ နလေ့ညျခငျးလကေ ပူအိုကျတဲ့အငှအေ့သကျတှပေါနမွေဲပဲ/ ဒီနှဈပိုငျးထဲမှာတငျ စိနျတိုး တို့ ရှာထဲမှာ အဲ့လို မွတှေငျးတူးရငျး ၊ ရတှေငျးတူး ၊ ရကေနျတူးရငျး ရှတေိုငှစေတှရေလာတဲ့အကွောငျးတှေ ၊ တဈခြို့ဆို နခေ့ငျြး ညခငျြး ကွီးပှားသှားကွတဲ့အကွောငျးတှေ ကွားကွားနရေတတျတယျ ၊ တဈနတေ့ော့ ဘာအစီအစဉျမှ မရှိပါဘဲ စိနျတိုး ရဲ့အဖကေ အိမျဝိုငျးထဲမှာရှိတဲ့ မွတှေကေိုတူးဆှနတောကိုသှားမွငျလိုကျတယျ
“ အဘ…ဘာတှလေုပျနတောလဲ … နပေူကွီးထဲကို ဖယျဖယျ ကြုပျ လုပျလိုကျမယျ ” အဖလေုပျသူက ဒီနရောမှာ အပငျတဈပငျပြိုးခငျြလို့ မွတှေကေို ဆှနတောပါလို့ ပွောလာတယျ … သိပျကွာကွာမတူးလိုကျရပါဘူး ၊ သငျ့တငျ့ သလောကျ မွအေကယျြနဲ့ မွလေေးတှေ မှ ထှကျလာတယျ ၊ စိနျတိုးလညျး နောကျဆုံးတဈခကျြအနနေဲ့ မွကွေီးထဲ ကို အားစိုကျပွီး ပေါကျတူးနဲ့ လှဲပေါကျလိုကျတဲ့အခါ မွထေဲမှာမှာ ပေါကျတူးက မွအေိုးတဈလုံးနဲ့ ထိတဲ့အသံကိုကွားလိုကျရ တော့တယျ
“ ဂှကျ….. ” “ ဟာ….ဟငျ… ” စိနျတိုး တဈယောကျ အတျောလေး ရငျခုနျသှားမိပွီးတော့ မွကွေီးကိုသာသာလေး ယကျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ မွကွေီးထဲမှာ ပေါကျတူးအရှိနျနဲ့ကှဲအကျသှားတဲ့ အိုးခွမျးပဲ့လေးတှကေို တှလေို့ကျရတယျ … ဖွညျးဖွညျးခငျြး ဆကျပွီးတော့ လကျကလေးနဲ့ ယကျကွညျ့တဲ့အခါမှာ အိုးခွမျးပဲ့တှေ အမြားကွီးအောကျထဲကနေ ဖွိုးဖွိုးဖွောကျဖွောကျ ဖွဈနတေဲ့ ပတ်တမွားခဲလေးတှကေို ညဈနှမျးအိုမငျးနပွေီး အိစငျးနတေဲ့ ရှထေညျပစ်စညျးအမြိုးမြိုးကို တှလေို့ကျရတယျ …. ၊ ရှတှေကေို သာသာလေးယူပွီး ပုဆိုးစနဲ့ပှတျကွညျ့လိုကျတော့မှ အရညျအသှေးအရမျးကောငျးတဲ့ ရှမှေနျးသိသာအောငျ ဝငျးတောကျလာပါလရေော… ၊
ဘာပွောကောငျးမလဲ စိနျတိုးရော သူ့အဖရေော ခဏလေး ကွောငျအမျးအမျးဖွဈနရောက စိနျတိုးက “ အဖေ…အဖေ…သားတို့ခမျြးသာပွီးဟား.ဟား.. ခမျြးသာပွီ အဖေ…. ” “ ဟား…ဟား…. ဘုရားက ငါတို့ကို ပေးပွီသားရေ ငါတို့ ဘဝတော့ နခေ့ငျြးညခငျြးပွောငျးပွီ….ဟားဟား ” သားအဖနှဈယောကျတညျးရှိကွတာမို့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အားရဝမျးသာ ပှဖေ့ကျထားကွရငျး အပြျောလှနျနမေိတယျ…. ၊ ရှာထဲကလူတှေ မွကွေီးထဲကနေ ရရနတေယျလို့ သတငျး ကွားထားတာ အခုတော့ သူတို့သားအဖလညျး ရခဲ့ပွီမဟုတျလား….. ၊
ရှေးဟောငျးလကျရာ အုတျကြောကျ တှနေဲ့ သခြောဆောကျထားတဲ့ ကြောငျးကွီးမို့ အတျောလေးအိုနယေုံကလှဲပွီး ခနျ့ထညျနတေုနျးပဲ… ၊ ကြောငျးအိုကွီးရဲ့အထဲမှာ သီတငျးသုံးနတေဲ့ ဆရာတျောအိုကွီးတဈပါးအနားမှာလညျး ရှာသူရှာသားတဈခြို့က အုံနပွေီး အဲ့ဒီ့ရှာသူရှာသားတှထေဲက တဈယောကျက အရငျဆုံး လြှောကျလိုကျတာက “ ဘုနျးဘုနျးဘုရား တပညျ့တျောတို့ရှာထဲမှာ လူတျောတျောမြားမြားက မွကွေီးတူးရငျးနဲ့ မွကွေီးထဲက ရှငှေေ ရတနာတှကေို ရနတေယျလို့သိထားရတယျဘုရား…ဘာကွောငျ့လို့ အရှငျဘုရားမွငျပါသလဲဘုရား”
“အိမျး ပစ်စညျး ဥစ်စာဆိုတာ လူတှရေဲ့ ကုသိုလျ အကုသိုလျကံတှအေလြှောကျ ရရှိ နိုငျတယျ ၊ ဘဝဟောငျးက ဆှတေျောမြိုးတျောတှကေ သူတို့အတှကျရညျစူးပွီး ကုသိုလျလုပျပေးစခေငျြလို့ ပေးတာမြိုးတို့ ၊ သိုကျနနျးတှကေ ပေးတာမြိုးတို့ ၊ ကိုယျနဲ့ အကွောငျး တိုကျဆိုငျပွီး ရခြိနျ ၊ ပိုငျဆိုငျခြိနျတနျလို့ ရတာတို့…စသဖွငျ့ပေါ့ ဦးဇငျး နားလာ ထားပမေယျ့ ၊ တဈဖကျက အခွခေံကကြပြွနျတှေးကွညျ့မယျဆိုရငျ ဒီမွေ ဒီနဆေိုတာ ရှေးဟောငျးနယျမွေ … ၊ ပိုတိကြ သှားတာက အခုရတဲ့သူတေ အားလုံးရထားတဲ့ ဒီပစ်စညျးတှကေ ရှေးဟောငျးပစ်စညျးတှဖွေဈနတောပဲလေ… ၊ ဒီလိုမြိုး တနျဖိုးကွီးပစ်စညျးတှကေို ရနေ တယျဆိုတော့ ဒါတှကေ ဘုရားရဲ့ ဌာပနာပစ်စညျးတှလေညျး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျတယျ ၊ ဦးဇငျးတို့ ရှာသားတှေ ကိုယျ့အိမျအောကျ..အိမျနရောမှာ ရှေးဟောငျးဘုရားပွို ဘုရားပကျြတှေ မရှိနိုငျဘူးလို့ ဘယျသူမြား အာမခံနိုငျမှာတဲ့လဲ ၊ နောကျပွီး ရှဆေိုတဲ့ သတ်ထုမြိုး က မွအေောကျက မွလှောတှကွေောငျ့ မွကွေီးထဲမှာပဲ နရောရှတေ့တျတဲ့သဘောရှိသေးတယျ… ၊ ဒီတော့ ဦးဇငျးအနနေဲ့ အကွံပေးခငျြတာပါ… ၊ ကိုယျရထားလို့ ကိုယျ့ဥစ်စာမှနျပါတယျ… ၊ ကိုယျကြိုးလညျးသုံးရငျး ကုသိုလျလညျး ပွုကွပါလို့ပဲပွောခငျြတယျ ”
တဈခြို့ကလညျးပွောကွတယျ… ဒီရှတှေငှေတှေေ တနျဖိုးကွီးပစ်စညျးတှကေ ဘုရား ဌာပနာတိုကျကနေ ပေါကျထှကျလာ တာတဲ့ …. ၊ စတေီပွို ၊ စတေီပကျြတှထေဲကနေ ငလကျြဒဏျကွောငျ့ မွကွေီးထဲကိုရောကျပွီး မွလှောအလိုကျ ရှလေ့ာ တဲ့ ရတနာတှတေဲ့ …. ၊ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ အနီးစပျဆုံးဖွဈနိုငျတာက ရှေးလူတှေ ဝှကျထားခဲ့တဲ့ပစ်စညျးဥစ်စာတှဖွေဈရငျဖွဈ ၊ မဟုတျရငျ ဘုရားဌာပနာတှပေဲ…. ၊ ခတျေကာလကလညျး အစိုးရက တဈနိုငျငံလုံးအထိ အာဏာမရောကျနိုငျသေး တော့ ဒီလိုတိူးလို့ရလာတဲ့ရတနာတှကေိုလညျး သိမျးတာဆညျးတာ ဖမျးတာတှေ မရှိဘူး ၊ ကိုယျ့ခွံထဲမှာတှတေ့ာ ကိုယျပိုငျတာပဲလို့သတျမှတျပွီး သိုသိုသိပျသိပျနဲ့ နနေကွေတဲ့သူတှကေမြားတယျ… ၊
ဘုရားပစ်စညျး ဆိုတာထကျ ကိုယျရ ကိုယျယူ ၊ ကိုယျနဲ့ထိုကျလို့ ကိုယျရတာလို့ပဲ ခံယူထားကွတယျလေ … ၊ နောကျပိုငျးမှာ တဈရှာလုံးက ရနမှေနျးသိတော့ ဘုရားအိုတှေ နားမှာလညျး မွတှေေ လိုကျတူးလိုတူး နဲ့ အလုပျ တောငျကောငျးကောငျးမလုပျစားကွတော့ဘဲ ဒီလို ဟိုတူးဒီတူးလုပျရတာကို ပိုခုံမငျနတေတျသှားကွတယျ ၊ ပုဂံခတျေက ရှေးလူတှရေဲ့ ကြိနျစာတှကေ ဘယျလောကျထိပွငျးတယျဆိုတာတို့ ၊ ဘုရားပစ်စညျး အဆိပျသီးဆိုတဲ့ စကားတှကေိုလညျး မစဉျးစားနိုငျတော့…. လောဘမီးကွောငျ့ အမွငျတှကေို ကှယျသှားနတောမြိုး…. ။
ရောဂါ ထှထှေထေူးထူးမရှိပါဘဲနဲ့ စိနျတိုးရဲ့အဖေ ရုတျတရကျ ကှယျလှနျသှား ခဲ့တယျ အိပျနရေငျးနဲ့နှိုးမရတော့ဘဲ အသကျပါ ပါသှားတဲ့အထိဖွဈသှားခဲ့တာလေ… ၊ စိနျတိုးလညျး အဖဖွေဈသူအတှကျ စိတျမကောငျးခွငျး ကွီးစှာ ဖွဈနေ တယျ ၊ ရထားတဲ့ ပစ်စညျးလေးတှကေိုတောငျ မရောငျးခရြသေးခငျ ၊ မဖွုနျးရ မသုံးရသေးခငျမှာ အဖဖွေဈသူ ကှယျလှနျ သှားတော့ ပိုစိတျထိခိုကျရတာပေါ့… ၊ အဆုံးမှာ စိနျတိုး ဆုံးဖွတျခကျြတဈခုခလြိုကျပွီး တဈယောကျတညျး တဈကိုယျ တညျး အဝတျလေးနညျးနညျးနဲ့ ရတနာထုတျကို ကြောကအိတျထဲမှာ သခြောဝှကျထားပွီးတော့ ရနျကုနျမွို့ကို တကျလာ ခဲ့တယျ… ၊
တောမှာမှေး တောမှာကွီးလာတဲ့သူမို့ ရနျကုနျဆိုတာ မကျြလုံးထဲမှာ နတျပွညျကွီး လိုဖွဈနတေယျ ၊ တောမှာလို ထနျးတောတှအေစား တိုကျကွီးကွီးတှပွေညျ့နတေယျ ၊ တောက ရှာသူမ ညိုခြောလေးတှအေစား မကျြနာခတြှေနေဲ့ လှခငျြတိုငျးလှနကွေတဲ့ ရနျကုနျသူတှကေို ငေးနမေိတာအမော… ၊ ရနျကုနျသာရောကျလာခဲ့တာ အသိအကြှမျးလညျးမရှိ ၊ ဘယျသှားလို့ဘယျလာရမှနျးလညျးမသိ ၊ ရညျရှယျခကျြလညျးမရှိ … ၊ ဖွဈခငျြတာက အိတျထဲက ရတနာတှကေို ထုတျရောငျးပွီးတော့ ရနျကုနျမှာ တိုကျလေးတဈတိုကျနဲ့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလေးတဈခုလုပျရငျး သူဌေးလိုမြိုးနခေငျြ တာလေ.. ၊
“ဗြို့ နောငျကွီး ” “ ခငျဗြာ…ကြှနျတေျာ့ကိုချေါတာလားဗြာ ” စိနျတိုး တဈယောကျတညျး ရနျကုနျဘူတာကွီးနားမှာ ယောငျပပေနေဲ့ ဟိုကွီးဒီကွညျ့ လုပျနတေုနျး အတျောလေးသနျ့သနျ့ပွနျ့ပွနျ့နဲ့ သူဌေးရှုံးလောကျအောငျ ဝတျဆငျ ထားတဲ့ မကျြနာစိမျးတဈယောကျက တျောတျောလေးနားဝငျခြို ဖျောရှတေဲ့လသေံနဲ့ စပွီး မိတျဖှဲ့လာတယျ ၊ ရိုးသားတဲ့ တောသူတောငျသားမို့ စကားကိုခြိနျပွောရမှနျးလညျးမသိ ၊ လူတိုငျးကိုမယုံရမှနျးလညျးမသိနဲ့ စိနျတိုးတဈယောကျ သူ အမှရေထားတဲ့ ရှထေညျ ၊ ကြောကျထညျတှေ တဈခြို့ကို ဈေးမြားမြားရတဲ့ဆီမှာ ရောငျးခငျြပွီး ငှကေိုလကျငငျးလိုခငျြတဲ့ အကွောငျး ၊ လကျ ရှိ ရနျကုနျမှာ နစေရာလေးတဈခုကိုဝယျခငျြတဲ့အကွောငျး ၊ လုပျငနျးလေးတဈခုကို စပွီးလုပျခငျြတဲ့ အကွောငျးတှပွေောပွလိုကျတော့ လူစိမျးက အတျောလေးမကျြနာပှငျ့သှားပွီး
“ နောငျကွီးကြုပျနဲ့တှတေ့ာ ကံကောငျး တာပဲ…ရနျကုနျလို့နရောကွီးမှာ နောကျကွီး တဈယောကျတညျး ဒီလိုနနေရေငျ လူလိမျတှေ ၊ အလဈသုတျသမားတှနေဲ့ နောငျကွီးပါလာတာတှတေောငျအကုနျပွောငျသှားဦးမယျ ၊ ကြုပျကလညျး ဘာရယျမဟုတျဘူး ဒီနားမှာ နိုငျငံခွားသား တှနေဲ့ အရောငျးအဝယျလေးတဈခုလုပျပွီးအပွနျ မိတျဆှတေဈယောကျနဲ့ ခြိနျးထားတာနဲ့ ရပျစောငျ့နရေငျးကနေ နောငျကွီးကိုမွငျတော့ အကူညီလိုမယျထငျလို့မေးကွညျ့တာပါ ” “ ကြေးဇူး တငျပါတယျ ဗြာ..ဒါနဲ့ ဒီက..နာမညျက ”
“ သွျော…ဟော..ဟော.. ကြှနျတေျာ့နာမညျက သနျးမွငျ့လှိုငျပါဗြ… ဒီနားတဈဝိုကျမှာ ကြုပျကိုမသိတဲ့သူခပျရှားရှားပါ.. ၊ ကြုပျက ကြောကျစိမျးတှေ ၊ ရှေးဟောငျးပစ်စညျးတှေ အရောငျးအဝယျလုပျတဲ့ သူတဈယောကျပေါ့ဗြာ… ” “ ဟုတျပါပွီဗြာ… ဒါနဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို ကူညီပေးမယျဆို တဈဆိတျလောကျဗြာ…ကြှနျတျော အမှရေထားတဲ့ ပစ်စညျးလေးတဈခြို့ကို ရောငျးခငျြတယျ ” လူစိမျးက သူ့လကျက နာရီကိုတဈခကျြကွညျ့လိုကျရငျး “ ကောငျးပွီဗြာ..ကြုပျဘျောဒါတော့ မလာတော့ဘူးထငျပါတယျ လာဗြာ ကြှနျတျော နောငျကွီးကို လိုကျကူညီပေးမယျ… ကြုပျနောကျသာလိုကျခဲ့ပတေော့… ”
လူစိမျးနောကျက အားကိုးတကွီးနဲ့ လြှောကျလိုကျသှားရငျး နာရီတျောတျောလေးကွာအောငျ လမျးလြှောကျလိုကျပွီး နောကျမှာ စိနျကုလားဆိုငျတဈဆိုငျကိုရောကျလာခဲ့တယျ “ ကဲ ဒီကဆရာကွီးက ဘာပစ်စညျးရောငျးခငျြတာလဲ ” ရတနာဆိုငျပိုငျရှငျပုံစံနဲ့တူတဲ့ ကုလားက သနျးမွငျ့လှိုငျကို သိသလိုနဲ့ ရငျးရငျးနီးနီးနှုတျဆကျပွီး သနျးမွငျ့လှိုငျက မိတျဆကျပေးလိုကျ စိနျတိုး ဘကျကိုလညျ့ပွီးတော့ မေးလိုကျတဲ့အခါ စိနျတိုး က ဘေးဘီဝဲယာကိုတဈခကျြကွညျ့ပွီး သူ့ရဲ့ ပုဆိုးအစုတျလေးနဲ့ ထုတျထားတဲ့အထုတျထဲကို ဖွညျးဖွညျးလေးနှိုကျလိုကျပွီး ပွနျထှကျလာတော့ ရှတှေဝေငျးအိနတေဲ့ လကျကောကျတဈခုနဲ့အတူ ရဲရဲတောကျနတေဲ့ ကြောကျကွီးတပွူးပွူးနဲ့ ဘယကျကွီးတဈကုံး ပါလာတယျ ၊
ရတနာဆိုငျပိုငျရှငျနဲ့ သနျးမွငျ့လှိုငျက အတျောလေး မကျြလုံးမကျြစံပွုးသှားပွီး စိနျတိုးပေးတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို အပွနျပွနျအလှနျလှနျ မှနျဘီလူးနဲ့ကွညျ့ရငျး မယုံသလိုနဲ့ “ ဒါ ခငျဗြားတို့ ဘိုးဘှားပိုငျတာဟုတျ..ဟုတျ…ဟုတျပါတယျနျော ” စိနျတိုးကလညျး လိမျတာကို သိသှားမှာစိုးလို့ စကားနညျးနညျးထဈသှားပွီး “ ဟာ..ဟုတျ..ဟုတျ.ပါတယျဗြ…ဘာလဲ့ ကြုပျကလိမျပွောရမှာလား.. ကဲပွော ကြုပျကိုဘယျလောကျပေးမှာလဲ…တောသားဆိုပွီးဈေးနှိုမျမယျတော့မကွံနဲ့နျော ကြုပျဒီပစ်စညျးတှရေဲ့ဈေးကို တဈခွားမှာလညျးစုံစမျးလာခဲ့ပွီးသား…. ” လောဘရဲ့အရှိနျတှကွေောငျ့ စိနျတိုး ပွောမိပွောရာတငျးပွောလိုကျမိတယျ တဈဖကျက ရတနာဆိုငျပိုငျရှငျကလညျး အမှနျတကယျကိုသဘောကသြှားပွီး စိနျတိုးပေးတဲ့ ရှေးဟောငျးလကျဝတျလကျစားတှကေို ပေါကျဈေးထကျ သုံးပုံပုံ တဈပုံစာကို လြော့ပွီး စိနျတိုးကို ပေးလိုကျတယျ… ၊ ဒီလိုလြော့ထားပမေယျ့လညျး ရတနာဆိုငျပိုငျရှငျ ထုတျပေးလိုကျတဲ့ ငှပေုံကွီးက စိနျတိုးတဈသကျ တဈကွိမျမှ မမွငျဖူးတဲ့ငှတှေမေို့ တဈခကျြမငွငျးတော့ဘဲ ပှဲဖွဈသှားခဲ့တယျ ၊
နောကျပိုငျး သနျးမွငျ့လှိုငျအကူအညီနဲ့ရနျကုနျ မငျးလမျး တာမှေ ဘကျမှာ အိမျလေးတဈလုံးကို ဝယျဖွဈခဲ့တယျ ၊ အဲ့ဒီ တုနျးက ဒီနခေ့တျေလိုမြိုး ရပျကှကျရယျလို့တောငျ သီးသနျ့မရှိသေးတဲ့အခြိနျ ၊ တိုကျမွငျ့တှဆေို ဝလောဝေး….. ၊ အကုနျကိုယျ့အိမျကိုယျ့ဝနျးလေးတှနေဲ့ နနေကွေတဲ့အခြိနျ ၊ စိနျတိုးအတှကျတော့ နစေရာမပူရတော့ပွနျဘူး… ၊ စားဖို့ ကလညျး ပါလာတဲ့ ပစ်စညျးလေးတှကေိုရောငျးလိုကျ သုံးလိုကျဖွုနျးလိုကျနဲ့အဆငျကိုပွနေတောပဲ ၊ ဒီကွားထဲ ကိုသနျးမွငျ့လှိုငျက ကူညီပေးတော့ အမြားကွီးအဆငျပွနေတေယျ ၊ ဒီလူကိုလညျး ညီအဈကိုအရငျးလိုမြိုး မိတျဆှလေိုမြိုး မကျြလုံးမှိုတျပွီးကို ယုံနမေိတော့တယျ ၊
အခြိနျတှကွောလာတော့ စိနျတိုးလကျထဲမှာ ရှိနတေဲ့ ပစ်စညျးတှလေညျး သုံးလိုကျဖွုနျးလိုကျနဲ့ တျောတျောလေး ပါးလာပွီ… ၊ ဒါ့ကွောငျ့ ဝငျငှရေတဲ့ လုပျငနျးလေးတဈခုတော့ လုပျမှပဲဆိုပွီး ယုံကွညျရတဲ့ သနျးမွငျ့လှိုငျနဲ့ တိုငျပငျကွညျ့တဲ့အခါ သနျးမွငျ့လှိုငျက သူလညျး လုပျငနျးတဈခုလုပျဖို့ရှိတယျ ၊ အရာငျးအဝယျပုံစံမြိုးလေးပဲ အရငျလညျးသိပျမလို အမွတျ အမြားကွီး ကနျြတယျတယျဆိုတဲ့ လုပျငနျးတဈခုအကွောငျးပွောပွတော့ စိနျတိုးလညျး လူမပငျပနျးဘဲ ငှရှေငျတဲ့လုပျငနျး ကို သဘောကသြှားပွီး နောကျဆုံးကဉျြဆံအဖွဈ ပါလာသမြှရတနာတှကေို အကုနျရောငျးထုတျလိုကျပွီး ငှတှေကေို ရငျးနီးယုံကွညျရတဲ့ သနျးမွငျ့လှိုငျလကျထဲကို ထိုးထညျ့ပေးလိုကျတယျ။
“ ဒါပဲလေ… ကို စိနျတိုး မြားမြားလိုခငျြရငျ မြားမြားရငျးရတယျ….ဟားးး မပူနဲ့ ခငျဗြားငှတှေကေို နှဈဆ..သုံးဆ…လေးဆ ပှားအောငျ ကြုပျတာဝနျယူတယျ ကြုပျဖွငျ့ အရငျးမရှိလို့ငွိမျနရေတာ ဒီလိုသာဆိုလို့ကတော့ စဉျးစားစရာ တောငျ မလိုဘူးဗြို့ အလုပျဖွဈပွီ … ” အဲ့ဒီလိုပွောသှားပွီး နောကျတဈနကေ့တညျးက သနျးမွငျ့လှိုငျတဈယောကျ စိနျတိုးဆီကို ရောကျမလာတော့တာ လေးနှဈထဲတောငျရောကျလာခဲ့ပွီ …. ၊ သနျးမွငျ့လှိုငျအကွောငျးကိုလညျး ဘယျမှာမှ စုံစမျးမရ ၊ စိနျတိုး သိလိုကျပါပွီ…. လူယုံသတျလို့သတေယျဆိုတဲ့ ခံစားခကျြကို… ၊
အခုတော့ စိနျတိုးတဈယောကျ အိမျကလေးအဖကျတငျတာကလှဲပွီး လကျထဲ သုံးစရာငှတေဈခြို့အပွငျ ဘာမှမရှိတော့တဲ့ ဘဝကိုရောကျလာခဲ့ရပွီ.. ၊ ရှိတာလေးတှကေလညျးသုံးရငျးသုံးရငျး .. ဝငျငှမေရှိ …အထှကျခညျြးပဲဆိုတော့ ဘယျလို မြိုးကွာကွာရပျတညျနိုငျမှာလဲ…. ၊ နောကျဆုံး မရှကျမကွောကျ အလုပျတဈခုခုတော့ လုပျမှဖွဈမယျဆိုပွီး စိနျတိုး တဈယောကျ ဆိုကျကားလေးတဈစငျးကိုဝယျပွီး ရပျကှကျပတျဝနျးကငျြမှာ ပတျနငျးရငျး ဆိုကျကားသမားဘဝကို ရောကျသှားခဲ့ရတယျ … ၊ ဆိုကျကားသမားတှထေဲမှာမှ အိမျကောငျးကောငျးနဲ့နနေိုငျတဲ့ ရှားပါးဆိုကျကားသမားလေး စိနျတိုး ပေါ့….. ။
ဘဝတဈဆဈခြိုးပွောငျးလဲလာပွနျတော့ စိနျတိုးလညျး မိနျးမတှဘောတှရေပွီး သားသမီးနှဈယောကျတောငျ ထှနျးကား လာခဲ့ပွီလေ ၊ ကလေးနှဈယောကျမှာ အငယျမလေးက သုံးနှဈသားလေး နဲ့ အကွီးမက လေးနှဈ …. ၊ အရငျလူပြိုတုနျး က ကိုယျ့တဈကိုယျစာ အဆငျပွရေငျပွီးရောဆိုပွီး အလုပျကို ငတျမှ ထလုပျတတျပမေယျ့ အခုတော့ မိသားစုနဲ့ ကလေးနှဈယောကျနဲ့ဖွဈလာပွီမို့ စိနျတိုးတဈယောကျ နကေောငျးကောငျး မကောငျးကောငျး ၊ လုပျခငျြခငျြ မလုပျခငျြခငျြ ဆိုကျကားနငျးတဲ့အလုပျကို မရပျရဲဘူးဖွဈနတေယျ… ၊ ပငျပနျးတာတှစေုလာတော့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အပငျြးပွေ သောကျစားရငျးက အရကျကိုလညျး ဖွညျးဖွညျးခငျြးစှဲစပွုလာတယျ ၊
တဈနတေ့ော့ စိနျတိုးဘဝကို အပွောငျးလဲကွီးပွောငျးလဲစမေယျ့ အဖွဈဆိုးကွီးတဈခုနဲ့ ကွုံလာခဲ့တယျ… ၊ အိမျမှာ ဇနီးသညျဘကျက ဇနီးရဲ့ညီမ … စိနျတိုးရဲ့ခယျမတျောသူ အပြိုမလေးတဈယောကျ နယျကနေ လာလညျရငျး စိနျတိုးတို့ အိမျမှာ တညျးဖွဈတယျ ၊ စိနျတိုးရဲ့ဇနီးသညျကလညျး ဇာတျဆိုရငျ မကွညျ့ဘဲမနနေိုငျတတျတဲ့သူမို့ တဈနေ့ ယောကျြား ဖွဈတဲ့သူဆိုကျကားနငျးသှားနတေုနျး ကလေးနှဈယောကျကို ခြီပွီး လမျးထိပျနားက ဇာတျပှဲသှားကွညျ့ဖွဈခဲ့တယျ ၊ ဖွဈခငျြတော့ အိမျမှာလာတညျးတဲ့ ညီမဖွဈတဲ့သူက နမေကောငျးလို့ဆိုပွီး အိမျမှာအိပျပွီးကနျြနရေဈခဲ့တယျ ၊ဟိုးတုနျးက အိမျတှမှော အိပျရငျ အခနျးမဖှဲ့ဘဲ တနျးဆီအိပျတတျကွတာမို့ စိနျတိုးတို့မိသားစုတှေ အိပျတဲ့ ခွငျထောငျဘေးနားလေး မှာ ခှခှေလေေး အိပျပြျောနရေဈခဲ့တယျ… ၊ နောကျတော့ တဖွညျးဖွညျး ခွငျကိုကျတာကတဈကွောငျး နမေကောငျးလို့ ခွငျထောငျထမထောငျခငျြတာကတဈကွောငျးကွောငျ့ ဘယျသူမှမရှိတုနျး စိနျတိုးတို့မိသားစု ခွငျထောငျထဲ ခယျမဖွဈသူကဝငျအိပျဖွဈခဲ့တယျ ၊
ကံဆိုးမိုးမှောငျကခြငျြတဲ့ စိနျတိုးက ဒီလိုညမြိုးကမြှ စောစောစီးစီး ဆိုကျကားသိမျးလာပွီး အရကျကမူးလာသေးတယျ ၊ မူးမူးနဲ့ မယားခြောလေးရှိတဲ့ခွငျထောငျဆီကိုဝငျပွီး ဇနီးသညျကို သိုငျးဖကျလိုကျမိတဲ့အခါ….ဇနီးမဟုတျဘဲ သူ့ခယျမ ဖွဈနတောကို မွငျလိုကျရတော့တယျ … ၊ စိနျတိုးလညျး အတျောလေးလနျ့သှားပွီးခငျြခငျြး ခွငျထောငျအပွငျကို ထှကျမယျ ပွုလိုကျတဲ့အခါ ခယျမလုပျတဲ့သူက ဘာမပွောညာမပွော အသံဗွဲကွီးနဲ့ ငိုရငျး ထအျောပါလရေော… “ ကယျကွပါဦးရှငျ…ဒီမှာ ကြှနျမ အဈမရဲ့ယောကျြားလူယုတျမာ စိနျတိုး ကြှနျမကို မတရားပွုကငျြ့နပေါတယျရှငျ …ကယျကွပါဦး… ”
စိနျတိုး လညျး ဘာမှမလုပျမိသေးခငျမှာ မှားယှငျးပွီး ဖကျမိရာကနေ ဖွဈသှားတဲ့ ကိစ်စမို့ လနျ့နတေုနျး ရုပျရှငျတှထေဲကလို အရမျးတိုကျဆိုငျလှနျးပွီး ဇနီးဖွဈတဲ့သူက ဇာတျပှဲပွီးလို့ ကလေးနှဈယောကျခြီပွီး ပွနျလာတဲ့အခြိနျကွီးဖွဈနပွေနျတယျ… ၊ ဘယျသူမှနျတယျ မှားတယျဆိုတာထကျ ဇနီးဖွဈတဲ့သူရော ကလေးတှအေပွငျ ၊ အျောသံကွားလို့ ရပျကှကျထဲက ပွေးလာပွီး အိမျထဲရောကျလာကွတဲ့သူတှအေားလုံးအမွငျမှာ စိနျတိုးက ခယျမရဲ့ခွငျထောငျထဲက ထှကျလာတာကိုပဲ မွငျကွတယျလေ… ၊ မူးကလညျးမူးနတေဲ့သူမို့ အမြားနဲ့တဈယောကျ ဘယျလိုမှ ရှငျးပွမရတော့ဘဲ စိနျတိုး ဆုံးဖွတျခကျြကိုသခြောခလြိုကျပွီး စိတျဆိုးနတေဲ့ ဇနီးသညျပါးလေးကို ဖှဖှလေးကိုငျလိုကျတယျ။
စိနျတိုးရဲ့လကျကို ဇနီးသညျက ရိုကျခလြိုကျတဲ့အခါ ဇနီးကိုသိပျခဈြတဲ့ စိနျတိုးကအပွဈမဆိုဘဲ ပွုံးထားရငျး သူ့ကလေး တှကေို ဝအောငျနမျးလိုကျတယျ နမျးနတေုနျးမှာပဲ ဇနီးလုပျ တဲ့သူက အိမျပျေါကဆငျးမယျ…ရှကျတယျဆိုပွီး အထုတျတှေ ဆှဲပွီး အဝတျတှထေညျ့နတေယျ ၊ စိနျတိုးကတော့ ဘယျသူ့ကိုမှ ဘာမှ ပွောမနတေော့ဘဲ အိမျအပျေါကိုပွေးတကျသှား လိုကျတယျ… ၊ ခဏလေးကွာတော့ အိမျပျေါကနေ “ဝုနျး” ဆိုတဲ့ အသံကွီးကိုလူတိုငျးကွားလိုကျရလို့ အံ့သွသှားပွီး ပွေးတကျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ အိမျပျေါမှာ လညျပငျးကွိုးကှငျးတနျးလနျးကွီးနဲ့ သနေတေဲ့ စိနျတိုးနဲ့အတူ သူကွိုးဆှဲခြ ခါနီး ခွထေောကျနဲ့ကနျထုတျလိုကျတဲ့ ခှေးခွအေပုလေးတဈခုံးကို လဲလကျြသားလေးမွငျလိုကျရတယျ.. ၊
ဒီအဖွဈကိုမွငျမှ ဇနီးလုပျတဲ့သူကလညျး ယူကွုံးမရတှဖွေဈ ၊ ပတျဝနျးကငျြ ကလညျး သနားတဲ့သူကသနားကွ တဈခြို့ က စိနျတိုး အရကျကွောငျကွောငျပွီး သတျသေ သှားတာလို့ ခနဲ့ကွနဲ့ စိနျတိုး တဈယောကျ သူမှနျကနျကွောငျးကို အသကျနဲ့လဲပွီးပွသှားရငျး မိသားစုကိုမကျြနာမပွရဲလို့ ထှကျပေါကျရှာသှားခဲ့ပွီလေ….. ။ မွငျးကပါ အရပျက ရတနာပစ်စညျးတှရေဲ့ ကြိနျစာတှကွေောငျ့ စိနျတိုး ဒီလိုမြား ဖွဈရလသေလားလို့ ထငျနိုငျ လောကျပါရဲ့……… ။
အမေရိကန် ချွေးမနဲ့ ဗမာချွေးမ ဘာကွာလဲ ဖတ်ကြည့်ဗျာ
စိတျထားကောငျးတဲ့ ညီမလေးမသေစ်စာမောငျရဲ့အကွောငျးလေးကို ပွောပွရငျး ဝမျးနညျးမကျြရညျကနြတေဲ့ဘဘေီမောငျ